မြန်မာကို စွပ်စွဲထားတဲ့အမှု အိုင်စီဂျေမှာ ဂမ်ဘီယာ...
10 ธ.ค. 2562 - 23:18 น.
ဂမ်ဘီယာ ဘက်က သက်သေတင်သွားတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က ပိုစတာ
မြန်မာက လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗန်းရှင်းကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံက စွပ်စွဲထားပြီး ကြားဖြတ်အစီအမံ အမိန့်တွေ ချမှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတာကို နယ်သာလန် နိုင်ငံ သည်ဟိဂ်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး အိုင်စီဂေျမှာဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်က ကြားနာခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနေ့ တရားရုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ပြီး တက်ရောက်လာခဲ့ပြီး တော့ မြန်မာနိုင်ငံဘက် က ငှားရမ်းထားတဲ့ရှေ့နေ ဝီလီယံ ရှားဘတ်စ်လည်း တက်ရောက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု အန္တရာယ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်ရှိနေလို့ ဆိုပြီး provisional measures လို့ခေါ်တဲ့ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေ မြန်မာဘက်က လုပ်ဆောင်အောင် အိုင်စီဂျေက အမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ ဒီနေ့ ဂမ်ဘီယာဘက်က လျှောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာဘက်ကတော့ ဂမ်ဘီယာ တရားရေးဝန်ကြီး နဲ့ ရှေ့နေချုပ် အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူးက ဦးဆောင်ပြီးတော့ အမေရိကန်ရှေ့နေအဖွဲ့က လျှောက်လဲပါတယ်။
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု အန္တရာယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်ရှိနေလို့ဆိုပြီး provisional measures လို့ခေါ်တဲ့ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေ ထုတ်ပေးနိုင်အောင် သက်သေ အထောက်အထားတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို အမေရိကန်ရှေ့နေအဖွဲ့က ရှေ့နေ ပေါလ် ရိုက်ဂနာအပါ အဝင် ရှေ့နေ ၈ ယောက်လောက် က ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို ကိုးကားပြီး၃ နာရီနီးပါး လျှောက်လဲ သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူး
ဂမ်ဘီယာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူးက ဘာကြောင့်တရားစွဲတယ်ဆိုတာကို အဓိက စပြောပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗင်းရှင်းမှာ လက်မှတ်ထိုးထားတယ်၊ ရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စမှာ မြန်မာဘက်က ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗင်းရှင်းကို လိုက်နာဖို့ တာဝန် ပျက်ကွက်တယ်ဆိုပြီး တရားစွဲတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဂမ်ဘီယာ ပြောဆိုတာကို တောက်လျှောက်ငြင်းတာကြောင့် အခုလို အိုင်စီဂျေမှာ လာပြီး လျှောက်လဲရတာလို့လည်း အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူးက တရားရုံးမှာ ပြောသွားပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လူအများအပြားသေဆုံးပြီး တိုင်းပြည်က လူတွေ ထွက်ပြေးခဲ့ရသလို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေ ရပ်တန့်ဖို့ကို လည်းဂမ်ဘီယာက တောင်းဆိုပါတယ်။
သူဟာ အိုအိုင်စီကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက်က ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့ သူတို့တွေ အခွင့်အရေးအတွက် အခုလို တရားစွဲရတာပါလို့လည်း သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
သည်ဟိဂ်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး အိုင်စီဂေျ
မြန်မာ ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗန်းရှင်းကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး အချက် ၇ချက်ကိုပြော
ဂမ်ဘီယာ ဘက်က ရှေ့နေနောက်တစ်ဦးကတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကယ်တင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိတဲ့ အကြောင်းနဲ့ မြန်မာတပ်မတော်ဘက်က ဒါတွေကို ကျုးလွန် ခဲ့ပြီးတော့ မြန်မာအစိုးရက တားဆီးဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့တယ် ဆိုပြီးတော့ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ ကို အဓိက ကိုးကားပြီးပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့ အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် ရန်ဟီးလီပြောခဲ့သလို မြန်မာတပ်မတော် ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးမှာ တရားစွဲသင့်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ်မှာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်တယ်လို့ ညွန်ပြတဲ့ အချက် ၇ ချက် ကို ဂမ်ဘီယာဘက်က တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
၁။ တပ်မတော်ရဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှု။
၂။ တပ်မတော်ရဲ့ စနစ်တကျ ချေမှုန်းဖျက်ဆီးရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု။
၃။ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ အမျိုးသမီးနဲ့ မိန်းကလေးတွေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့မှု။
၄။ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး စစ်ဆင်ရေး အတွင်းနဲ့ နောက်ပိုင်း ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ် မြန်မာ တာဝန်ရှိသူတွေက လူမျိုးရေး ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု၊ စော်ကားမှု။
၅။ နိုင်ငံတော် အဆင့် မူဝါဒတွေမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေနဲ့ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ခွဲခြား ဆက်ဆံတဲ့ မူဝါဒနဲ့ အစီအမံတွေရှိမှု၊ ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်းက ရှိနှင့်ပြီး လူမျိုးစု၊ လူမှု အသိုင်းအဝန်းနဲ့ လူဦးရေ တည်ရှိ ပုံစံ ပျက်ပြားအောင် ဆောင်ရွက်မှု။
၆။ အများပြည်သူကြား ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမုန်းတရား ဖြန့်ချိနေတာကို အစိုးရက အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု မရှိခဲ့မှု။
၇။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ချိုးဖောက်နေမှုကို အစိုးရ အနေနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ တရားစွဲဆိုဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့မှု
အဆုံးအဖြတ်မဲပေးနိုင်တဲ့ အိုင်စီဂျေ ဥက္ကဋ္ဌ (အလယ်)
UEHRDအနေနဲ့ လည်းတာဝန်ရှိတယ် လို့လည်းပြော
မြန်မာအစိုးရဟာ ဒါတွေကို တားဆီးဖို့ ပျက်ကွက်တယ်ဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါအပြင် အစိုးရရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ(UEHRD)အနေနဲ့ လည်းတာဝန်ရှိတယ် လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ပါဝင်တဲ့ UEHRD ဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု တွေမှာ အထောက်အထားတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ အထဲမှာပါတယ်လို့လည်း ဂမ်ဘီယာ ဘက်က လျှောက်လဲသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေအတွက် နောင်တမရ သလို ရိုဟင်ဂျာတွေကို အသိမှတ်ပြုဖို့ ပျက်ကွက်တာ ကြောင့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေ ဆက်လက် ကျုးလွန်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိတယ်လို့လည်းလျောက် လဲ သွားခဲ့ပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာဘက်က တင်ပြတဲ့ အထောက်အထားတွေကတော့ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေပါတဲ့ အထောက်အထားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်းတော မင်းကြီးရွာ မှာ တပ်မတော်က လူပေါင်း ၇၀၀ ကျော် လောက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက် အလက်ကို ပြောသလို၊ ဂြိုဟ်တုပုံတွေအရ အဆောက်အအုံပေါင်း ၄၀၀ ကျော်လောက် ဖျက်ဆီးခံ ခဲ့ရတာနဲ့ ဘေးက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေရဲ့ အိမ်တွေ အကောင်းအတိုင်းရှိနေတာကိုလည်း ဂမ်ဘီယာဘက်က တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျပ်ပြင် ကျေးရွာမှာ စစ်သားတွေ ရာနဲ့ချီပြီးတော့ ရွာသား ၃၀၀ ကျော်ကို သတ်တာ၊ အိမ်တွေကို မီးရှို့တာ၊ အမျိုးသမီးတွေကို အဓမ္မပြုကျင့်တာတွေကို လည်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကို မေးမြန်းထားချက်တွေ နဲ့ ဂမ်ဘီယာဘက်က တင်ပြပါတယ်။ ဒါလည်း ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေပါတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရဘက် ကတော့ ဒီအချက်ကို ရွာသားတွေ ဟာ ကိုယ်ဘာသာကို မီးရှို့တာလို့ ပြန်ရှင်းထားတယ်လို့ လည်း ဂမ်ဘီယာ ဘက် ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အထောက်အပံ့တွေကို ငြင်းတာ နေထိုင်ခွင့်ကန့် သတ်တာကို လည်းပြော
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဒုက္ခသည် စခန်းတွေ မှာ ၂၀၁၂ လောက်က စပြီး ဒုက္ခသည် ၆ သိန်းလောက် နေထိုင်နေရ ပြီးတော့ စစ်တွေအောင်မင်္ဂလာလို နေရာမျိုးမှာ ရဲတွေက လုံခြုံရေးယူထားပြီး ခွင့်ပြုချက်ပါမှ ပဲ သွားခွင့်ရှိတာ ကိုလည်း ပြောသွားပါတယ်။
ဘာကြောင့် အခုလို အကြာကြီး တားထားရတာကို အကြောင်းမပြနိုင်တာကိုလည်း ထောက်ပြသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရိုဟင်ဂျာ စခန်းတွေမှာ အထောက်အပံ့တွေ ကို တားခံရတာ၊ ရိုဟင်ဂျာနယ်တွေကို ရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီး အစိုးရက မြေတွေသိမ်းသွားတာတွေကိုလည်း ထောက်ပြသွားပါတယ်။
တပ်မတော်က ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အစားအသောက်နဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို အခကြေးငွေ မပေးဘဲ အလကားရယူတာကို လည်း ဂမ်ဘီယာဘက်က ပြောသွားပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အန် ဗီစီကတ် - နိုင်ငံသား ဖြစ်မှု စိစစ်ရေးကတ်ကိုလည်း ကန့်သတ်ခြင်းခံရတဲ့ အထဲမှာ ပါတယ်လို့လည်း ဂမ်ဘီယာဘက်က ရှေ့နေတွေက ပြောသွားပါတယ်။
အစိုးရဟာ မြန်မာစစ်တပ်ကို မဆန့်ကျင်နိုင်ကြောင်း အထောက်ထားတွေပြ
အစိုးရဟာ မြန်မာစစ်တပ်ကို မဆန့်ကျင်နိုင်ကြောင်း အထောက်ထားတွေ ပြတဲ့နေရာမှာ အပြစ်ရှိသူတွေ အပြစ်ပေးခံရမှုကနေ ကင်းလွတ်နေတာတွေကိုလည်း ပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာတပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးမှာ ချုပ်ကိုင်ထားပြီး အစိုးရက ဆန့်ကျင်ဖို့ ဆန္ဒမရှိတာ ဒါမှမဟုတ် လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတာကို လည်း ထောက်ပြသွားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တပ်မတော်က ဗိုလ်ချုပ် ကြီးသုံးယောက်နဲ့ အတူ ရပ်နေတဲ့ပိုစတာပုံကြီးကိုလည်း အစိုးရဟာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အတူတူပါဝင်နေတယ်၊ အစိုးရအနေနဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို တာဝန်ခံဖို့ မရှိဘူးဆိုတာကို ပြတယ်လို့ စွပ်စွဲသွားပါတယ်။
ဒါအပြင် တပ်က ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကို အဓမ္မပြုကျင့်တာတွေကို နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ရုံး ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာက FakeRapeဆိုပြီး ထုတ်ပြန်တာကိုလည်း ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုပြီး ဂမ်ဘီယာဘက်က သွားပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရဟာ လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်တာကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် အပြစ်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်တယ် ၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အခြေခံကျတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံရမှု ကြုံနေရပြီး နောက်ထပ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု ကြုံရမယ့် အန္တရာယ်ကြောင့် ကြားဖြတ်စီရင်ခွင့် ကို တောင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ လည်း ဂမ်ဘီယာဘက်က ပြောပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံကို စွဲချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုခံချေပမယ့် မြန်မာခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အဖွဲ့ဟာလည်း ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ဒီစွပ်စွဲချက်တွေကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ တရားရုံးမှာ ပြန်လည် တုံ့ပြန် ခုခံချေပလျောက်လဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြန်မာကို စွပ်စွဲထားတဲ့အမှု အိုင်စီဂျေမှာ ဂမ်ဘီယာ ဘာတွေ လျှောက်လဲသွားလဲ